SHURUUDAHA GAWAARIDA BEERTEYDA AH EE GEEDO EE GOBOLKA LENINGRAD, BARTAMAHA RUSSIA IYO SIBERIA - BEER CAGAARAN
Bilowga hore ee bannaanka u ah: taariikhaha laga sameeyo basbaaska geedaha ee gobolka Leningrad, Irkutsk iyo Vologda, gobollada bartamaha Russia
Warbixintii ugu horeysay ee caymiska ayaa ka muuqatay wadamada yurub, laga bilaabo Spain iyo Talyaaniga, bilawgii gumeysiga Mareykanka.
Qofna ma awoodin in uu helo qaraabada ehelka ah ee "reer galbeedku"; wakhtigaa ayaa horeyba loogu soo koray sidii geed lagu beeray beeraha iyo beeraha Waqooyiga Mexico.
Dhowrkii qarnigii la soo dhaafay, faraca dhaqanka Mexicano ayaa ku guuleystay adduunka oo idil, dadka leh dhaqamo kala duwan oo dhadhan ah ayaa ku dhacay jacayl.
Noocyada faleebo sii kordhaya ee Russia
Wadankeena, in ka badan kala badh ka mid ah dhulka ayaa ku yaal xaaladaha adag ee cimilada, halkaas oo beeraha la socdo halis gaar ah. Basbaaska sida dhaqanka kulaylka-jecel wuxuu ku kori karaa dhul furan oo kaliya dhawr meelood oo koonfurta ah. Hase yeeshee, waxa soo baxaya qalabka gaarka ah ee daboolka ah, waxaa suurtagal ah in ay ku koraan dhulka la ilaaliyo.
Geedi socodka geedo sii kordhaya ma aha mid adag, waa siyaabo badan oo la mid ah farsamooyinka beeraha ee beerista yaanyo.
Waa muhiim! Xeerka kaliya ee qasabka ah ma aha in lagu beero noocyo fiiqan oo macaan leh isla qolka. Haddii kale, pollination ayaa dhacaya oo dhammaan basbaaska dhadhamin doonaan.
Mid ka mid ah marxaladaha muhiimka ah - xulashada kala duwan. Isticmaalka cusub waxaa ugu wanaagsan in la doorto basbaaska-diirran, basbaaska-weyn. Waa in maskaxda lagu hayaa in ay u baahan doonaan daryeel gaar ah, quudin iyo daaweyn joogto ah.
Miro leh derbiyo khafiif ah iyo cabbir ka yaryar ayaa ku habboon caanaha iyo suxuunta la kariyey.
Xeerarka aasaasiga ah ee helitaanka geedo of basbaaska
Hababka beeraha ee beeritaanka basbaaska waa isku mid dhamaan noocyada iyo gobollada. Qoyska ka kooban saddex ama afar qof, ayaa ah labaatan digaagood oo ku filan.. Abuuridda abuurka carrada ayaa ugu fiican marin, sababtoo ah celcelis ahaan waxay yihiin Cagaarka waa 60-70%.
Ka hor intaadan beerin, waxaad ku hayn kartaa 5-7 daqiiqo xal milix ah (2-3 qaado oo halkii litir oo biyo ah diirran). Miro-pop-up abuurka laga saaro, way cadahay inaysan kori doonin. Waxaan ku nadiifinnaa nasashada iyo jeermi-dilista muddo 1-2 saacadood ah 1-2% xal of potassium permanganate. Ka dibna biyo raaci biyo.
Beerleeyda Soodhaha - mid ka mid ah kuwa ugu adkeysi badan. Xaaladaha ugu wanaagsan, waqtiga ka soo beerihii caleemaha ugu horreeya waxay socon karaan 10 ilaa 20 maalmood. Si loo dedejiyo geedi socodka, bannaanka u badan ayaa isticmaala kiciyaasha gaarka ah, tusaale ahaan, "Zircon" ama qosol.
Sida dhaqanka kulaylka-jecel, basbaasku waa mid aad u xasaasi u ah isbeddelka heerkulka, sidaa darteed, wax soo saarka weyn waa la adkaan karaa abuurka ka hor inta aan la beeri. Si arrintan loo sameeyo, ku filan in lagu qooyo inta u dhaxaysa dhowr lakab oo faashad ah muddo hal usbuuc ah si aad uhesho miraha gawaarida hoose ee qaboojiyaha hoose iyo heerkulka qolka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan diyaarinta abuurka.
Ciidda geedo waa inay ahaato mid nafaqo leh. Waxaa laga iibsan karaa dukaanka, sida universal, iyo gaar ahaan loogu talagalay basbaaska.
Si fudud loo diyaariyo ciidda iyo naftaada. Arrintan awgeed laba qaybood oo ah soday isku qasan, hal qayb oo ciid ah, hal qeyb oo ah peat. 15 garaam oo Hure iyo potassium sulfate, 40 garaam oo superphosphate iyo hal quraar oo qoryo qoryo ah ayaa lagu daraa hal baaldi oo ah cayayaanka noocan oo kale ah.
Waa muhiim! Xaaladda marka ay jirto shaki ah oo faddaraynaya ciidda leh cudurrada iyo cayayaanka, bannaanka u soo jeediyo jeermi-dilida adoo isticmaalaya karkar xoog leh oo ah kaneecada kiriimiga ama qoyaan foornada 30-40 daqiiqo.
Nidaamka xididka Pepper waa mid aad u jilicsan, marka transplanting si fudud loo dhaawici karo iyo dhirtu waxay gaabin kartaa koritaanka muddo dheer. Sidaa darteed, xal aad u fiican waa in la koro geedo aan la soo qaadan. Seeds ayaa isla markiiba lagu beeray karti shaqsi ahaan 100 millilitir.
Qoyaanka dhoobada ayaa noqon kara mid ka mid ah doorashooyinka, iyo sidoo kale weelasha guriga lagu soo saaro ee dhowr lakab oo waraaq ah. Marka ay ku dhex daadato aqalka dhirta lagu koriyo uma baahnid in la sii daayo, waxaad ku rakibi kartaa haraaga diyaarka ah ee la socda weelka. Waqtiga gaaban, labada miraha iyo waraaqda laga bilaabo qoyaanka iyo microflora si sahal ah ayaa qayb uga noqon doonta ciidda.
Waxaad abuuri kartaa abuurka weelasha kale, kiiskan, markaad ku shubeyso dhulka, waxaad u baahan doontaa inaad si gaar ah uga taxadarto xididada. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in dib loo soo celiyo dhoobo dhoobo oo dhan, oo hore u waraabisay warshadda.
Abuur beertu waa inay ahaataa qoto dheer oo ah 1-1.5 sentimitir, iyaga oo ku diiray biyo diirran, daboolana caagag. Ka hor inta biqilka, heerkulka waa in la bixiyaa laga bilaabo 2 ilaa 25 darajo Celsius. Markaa wax ka yar 17 darajo.
Waa muhiim! Caleemaha waxay u baahan yihiin in ay marar badan biyo la waraabiyo oo la duubo, iyo sidoo kale inay siiyaan nalal wanaagsan.
Shuruudaha gawaarida beerto ee gobollada kala duwan
Marka la go'aaminayo wakhtiga degitaanka waa mid ku habboon in la isticmaalo xisaab fudud. Maqaaradaha fasalada kala duwan wuxuu noqon karaa mid hore iyo mid dhexe.
Waqtiga laga bilaabo caleemaha koowaad si fruiting waxaa mar walba cadeeyaa soo saaraha of abuur on xirmada. Isku celcelinta 100-135 maalmood. Isaga oo aan ku darno muddada biqilka ee 14-21 maalmood oo, oo lagu hagayo waqtiga la doonayo ee goosashada, waxaan xisaabineynaa tirooyinka lagama maarmaanka ah.
Gobollada kala duwan, dhaxan guga wuxuu ku dhamaanayaa waqtiyo kala duwan. Haddii uu jiro aqalka dhirta kulul, dalagga waxaa la heli karaa 2-3 toddobaad ka hor. Haddii kale waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo khatarta suurtogalka ah ee heerkulka habeenkulka yar.
Shuruudaha gawaarida beerto ee loogu talagalay geedo ee gobolka Leningrad: loogu talagalay lagu koriyo oo aan la karinin, miraha waxaa lagu beeray dabayaaqadii bishii Febraayo iyo horraantii Maarso, iyo dhamaadka May ee lagu koriyo;
Taariikhda Beeraha Beeraha ee geedo ku yaala bartamaha Russia - bilowga beeritaanka laga bilaabo 1 ilaa 15 Febraayo;
Marka laga beerto basbaaska geedo ee Vologda - dhammaadka February iyo bilowga Maarso;
Goorta la beerayo basbaaska geedo ee Irkutsk? Tusaale ahaan Bariga Siberia, tusaale ahaan, Irkutsk, laga bilaabo 15ka Febraayo ilaa 20.
Xaalad kasta, waxaa ugu fiican in ay ku beeri geedo dhulka ku jira da'da 55-65 maalmood, oo aan u oggolaan in ay koraan.
Basbaas khafiif ah waa jawi weyn. Basbaas macaan leh waa raaxo dhab ah oo ka dhexjirta dhirta qudaarta ah. Dhadhanka iyo dhadhanka waa mid gaar ah, waxana uu leeyahay codsiga ugu ballaaran ee karinta.
Salad baraf ah, saliida, keega, la kariyay, saliideed iyo la qaboojiyey oo la isku darey oo leh lakabyo kala duwan, lecho iyo ketchup - doorashadani waxay ku haboontahay wixii khudbo ah ee cunta wanaagsan. Horumarinta dalagga iyo helitaanka goosashada wanaagsan waa farxad weyn!
Caawin! Baro qaababka kala duwan ee basbaaska sii kordhaya: dheriga peat ama kiniiniga, dhulka furan iyo xataa waraaqda musqusha. Baro qaabka qaniinyada abuurista ee dabka, iyo sidoo kale cudurada iyo cayayaanka ay weerari karaan geedahaaga?
Qaababka beeraha ee Ural, gobolka Siberia iyo gobolka Moscow.